१२ लाखको पोर्चुगलको कामदार भिषा, लिस्बन एयरपोर्टबाट सिधै एनआरएनए पोर्चुगल अध्यक्षको घरमा रिसेप्सन र रात्रिभोज : के छ कनेक्सन ? - VON TV
१३ माघ २०७६, सोमबार २२:०२ 7835 ??? ???????
सिजनल वर्क भिषामा १२ लाख तिरेर पोर्चुगल आएका नेपाली कामदारको टोली लिस्बन एयरपोर्टमा ७-८ जनाको समुह -समुह गरेर आइपुग्छ । नेपालबाट कयौ सपना साँचेर र सुन्दर भविष्यको कल्पनामा डुब्दै लिस्बन एयरपोर्टमा पाइला टेकेको टोलीहरुलाई एकजना भारतीय नागरिक रिसिभ गर्छन् ।
वर्क भिषामा आएको टोलीलाई तिनै भारतीय नागरिकले गाडीमा राखेर लिस्बन एयरपोर्टबाट करिब ३-४ घन्टाको यात्रा गर्दै अन्दाजी २२० किलोमिटर टाढा माल्भादो भन्ने ठाउमा एउटा घरमा पुर्याउछन् ।
त्यस घरमा ति नेपाली कामदारहरुलाई स्वागत गर्ने एक नेपाली महिलाले स्वागत गर्छिन्। कामदार भिषामा आएको टोलीलाई रिसेप्सन पार्टी चल्छ, सेलिब्रेशन हुन्छ। स्वागत गर्ने महिला एनआरएनए पोर्चुगलका अध्यक्षकी धर्मपत्नी हुन् भनेर तिनै भारतीय नै परिचय दिन्छन् ।
रात्रिभोजपछि नेपालीहरुको टोलीलाई तिनै भारतीय नागरिकले जम्बोजिरा लैजान्छन् र एउटा घरमा बस्ने व्यवस्था मिलाउछन्।
सिजनल वर्क भिषामा १२ लाख तिरेर पोर्चुगल आएका नेपाली कामदारको टोलीलाई यसरी लिस्बन एयरपोर्टमा सिधै २२० किलोमिटर टाढा लागेर एनआरएनए पोर्चुगलका अध्यक्ष तिलक गैरेको घरमा रिसेप्सन र सेलिब्रेसन पार्टी चल्छ र रात्रिभोज हुन्छ।
लिस्बन एयरपोर्टमा दिनहुँ कयौ नेपाली ओर्लन्छन् र जान्छन् तर गैरेले किन १२ -१२ लाख तिरेर कामदार भिषामा आएका नेपालीलाई मात्रै रिसिभ गर्छन् , सिधै त्यत्ति टाढा लगेर भोज खुवाउछन् र अन्य बन्दोबस्त गर्छन् ?
अध्यक्ष गैरे किन आफू देखा नै पर्दैनन् तर पनि सिजनल वर्क भिषामा आएका नेपालीहरुलाई एयरपोर्टमा रिसिभ गर्नेदेखि भोज खुवाउने र उनीहरुको वासस्थानको व्यवस्था मिलाउछन् ? १२ -१२ लाख तिरेर कामदार भिषामा आएका नेपालीहरुसंग संघका अध्यक्ष गैरेको के छ कनेक्सन ?
उता नेपालबाट १२-१२ लाख तिरेर सिजनल वर्क भिषामा पोर्चुगल आएका नेपालीहरु ४ महिना बितिसक्दा पनि बेरोजगार भएपछि नेपालबाटै खर्च मगाएर यहाँ बस्न बाध्य छन्। पछिल्लो समय युरोपका विभिन्न मुलुकहरुमा एनआरएन नेपालदेखि युरोपसम्म मान्छे ओसारपोसार गर्ने संस्थाको रुपमा बदलिदैछ। हदैसम्मको हतकण्डा अपनाउदै पैसा र पावरको भरमा संघमा पद कुम्ल्याउने र त्यो पदलाई क्यासमा कन्भर्ट गर्ने परिपाटीको बिकास हुदै गएको छ।
पोर्चुगलमा वर्क सिजनल भिषामा आएका पिडित नेपालीहरुले आफुहरुलाई एनआरएन नेताहरुले नै ल्याएका र पोर्चुगलमा आफुहरुको बिचल्ली भएको गुनासो गर्दै आईरहेका छन् ।
पछिल्लो समयमा “सिजनल वर्क भिषा”मा पोर्चुगल आउनेहरुको संख्या बढ्दो छ। तर सिजनल वर्क भिषा कामदार वा मान्छेहरुलाई पोर्चुगल छिराउने माध्यम मात्रै बनेको छ। सिजनल वर्क भिषामा पोर्चुगल आएका अधिकांस नेपाली कामदारहरुलाई स्पोन्सर गर्ने कम्पनीले वास्तै नगरेपछि सबैको बिचल्ली भएको छ ।